စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ
လူနာတင်ယာဉ်များအား တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြည်တွင်းရှိလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ အတွက်လှူဒါန်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း အလှူရှင်များမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းခြင်းအတွက် အောက်ပါအချက် အလက်များပြည့်စုံပါက ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
( ခ ) Invoice တင်ပြရပါမည်။
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။
(ဃ) သတ်မှတ်မော်ဒယ်ဖြစ်ရပါမည်။ (၁၉၉၇-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-ခုနှစ်အတွင်း )
( င ) လူနာတင်ယာဉ်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။
( စ ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ/ဆေးပေးခန်းများအတွက် လှူဒါန်းသော လူနာ တင်ယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်အား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့်လျှောက်ထားရပါမည်။
(ဆ) တစ်ဖက်နိုင်ငံလှူဒါန်းစာ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအလှူရှင်အသင်းအဖွဲ့၏ လှူဒါန်းစာပါရှိရမည်။
( ဇ ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ပါရှိရမည်။
( ဈ ) အထက်ပါအချက်အလက်များပြည့်စုံပါက ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၌ လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။
အင်ဂျင်ပါဝင် (၆၆၀) စီစီရှိသော Suzuki Carry ကဲ့သို့ Mini Truck များအား Mini Box Truck အနေဖြင့် လျှောက်ထားမှုကိစ္စ
အင်ဂျင်ပါဝင် (၆၆၀) စီစီရှိသော Suzuki Carry ကဲ့သို့Mini Truck များအား (Box အပါအ၀င်) Mini Box Truck အနေဖြင့် လျှောက်ထားလာပါက ၂၀၀၃ ခုနှစ်မော်ဒယ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထိ USD 5000 ဖြင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း One Stop Services အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက်စီးအထိ Mini Bus လျှောက်ထားရာတွင်သိရှိရန်အချက်များ
(၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက်စီးအထိ Mini Bus (ဘယ်မောင်း) များအားရာသက်ပန်အနီဖြင့် ပြေးဆွဲခြင်းအတွက် Bus အခွန်နှုန်းထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်တွင် “Mini Bus များအား ထာဝရအငှား (ဘယ်မောင်း) အနီဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်” ဟုမှတ်ချက်ထည့်သွင်းပေးပြီး၊ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကုမဏီများမှ (၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက် စီးအထိ် Mini Bus (ဘယ်မောင်း။ညာမောင်း) များအားလူစီးယာဉ် အခွန်နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်မည်ဆိုပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်တွင်”ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် အနက်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်” ဟု မှတ်ချက်ထည့်သွင်း ပေးရန် One Stop Services အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
Normal စနစ်ဖြင့်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်းအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းစာအုပ်၏ ပြဌာန်းချက်အရ အပိုင်း(၆) ၊ စာမျက်နှာ(၄၉)တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီ ကြိုတင် သင်္ဘောတင်ခြင်းအား ခွင့်မပြုသဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် “သင်္ဘောမတင်မီ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်မှသာ အတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်နှင့် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးပါမစ် ထုတ်ပေးမှုအစီ အစဉ်တွင် သွင်းကုန်ပါမစ်ပြင်ဆင်ချက် ဆောင်ရွက်ရာ၌ “အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်း မဆောင်ရွက်မီကာလအထိ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်မှသာအတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ သွင်းကုန် ပါမစ်တွင် အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ID ဖွင့်လှစ်ပြီးကြောင်းရေးသွင်းပြီး ပါက ပြင်ဆင်ချက် ဆောက်ရွက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ယာဉ်တင်သွင်းသူများမှ မိမိထံသင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းများ BL နှင့် Cancellation စာရွက်စာတမ်းများအရ ကွဲလွဲမှု ရှိ/မရှိ သေချာစွာ ဂရုပြု စစ်ဆေး၍ လိုင်စင်နှင့်ကွဲလွဲချက်များအား အချိန်မီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန်ပါမစ်ထုတ်ပေးမှုစာရင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်အား အာဆီယံနိုင်ငံများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာနှင့်အပြိုင် ခေတ်မီတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွား ဆက်သွယ်သွားလာမှုများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ပြည်ပနှင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်စေရေး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းရှိ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသော နှစ် (၂၀) သက်တမ်းကျော်လျက်ရှိသည့် ယာဉ်အိုယဉ်ဟောင်းများကို ပြန်လည်အပ်နှံစေပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထုတ် မော်တော်ယာဉ်များ ပြည်ပမှအစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်းကို ဌာနဆိုင်ရာများဖြစ်ကြသည့် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့ ပါဝင်သော သက်တမ်းကြာမြင့်မော်တော်ယာဉ်များ ပယ်ဖျက်အပ်နှံ အစားထိုးလဲလှယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ One Stop Service (OSS) ဖွဲ့စည်းပြီး မော်တော်ယာဉ်အစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှစပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက် ဆီစားနှုန်းသက်သာသော တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လူစီးကားများကိုလည်း တင်သွင်းခွင့်ပြု ပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်ပမှ မော်တော်ကားများ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများအား ပြည်တွင်း မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာများတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Sale Center များတွင် ၀ယ်ယူခွင့်ပါမစ်များအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေရရှိထားသူများဖြစ်ကြသည့် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေသော ကုမ္ပဏီ ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီများ ၊ နိုင်ငံခြားတွင် ကာလ ရှည်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သံတမန်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြည်ပမှ လူစီးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စိစစ်ထောက်ခံပေးပို့ချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန်ပါမစ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်မှစတင်၍ မောေ်တ်ာယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်အရ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ခံစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သက်တမ်းလွန်မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းပုံစံများ
သက်တမ်းလွန် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် သိရှိသင့်သည့်အချက်များ << Start < Prev 123 Next > End >>	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3792375 Since June 2008